Nepalese TV presenter sets record for longest-ever talk show
နီပေါနိုင်ငံမှ ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ဦးဟာ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ချိန်အကြာဆုံးဆွေးနွေးပြောဆို
ခန်းတစ်ခုအား ကမ္ဘာ့ အချိန်အကြာဆုံးမရပ်မနားဆက်တိုက်ပါဝင်တင်ဆက်သူအဖြစ် စံချိန်တင် ပြောဆို
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်လက်ရှိနေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ရာဘီလာမီချာနေ အမည်ရှိဆိုပါနီပေါအမျိူးသား
ဟာ ရုပ်သံအစီအစဉ်အား ၆၂ နာရီကြာတင်ဆက်ပြောဆိုသွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ထိုအစီအစဉ်တွင် ၎င်းအနေဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓအားနီပေါတွင် ဖွားမြင်ခဲ့ သည်ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခန်း
အား နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ဂျာနယ်လစ်များ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများနှင့်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့ သည့် အပြင်
ကြည့် ရှုအားပေးသူများထံမှ ဖုံးဖြင့် ခေါ်ဆိုမေးမြန်းမှုများကိုလည်း လက်ခံပြောကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
ယခင်ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုအကြာဆုံးစံချိန်ကိုတော့ ၂၀၁၁ခုနှစ်က ယူကရိန်းနိုင်ငံသားနှစ်ဦးမှ စုစု
ပေါင်းမရပ်မနားတင်ဆက်ပြောကြားချိန် ၅၂ နာရီနဲ့ တင်ထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
၎င်းအနေဖြင့် ယခုကဲ့ သို့ ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင်နိုင်ရန်အတွက်ပြောဆိုရန်စီစဉ်ခဲ့ ခြင်းမှာ အမိနီပေါနိုင်ငံအား ကမ္ဘာကသိရှိ၊ ထင်ပေါ်စေရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ မစ္စတာ လာမီချာနေ ကဆိုပါတယ်...
သူဟာ ၂ ရက်ခွဲ အတွင်းအချိန်ပြည့် အစီအစဉ်တင်ဆက်ပြောဆိုနေသမျှကာလပါတ်လုံး အစားအသောက်
များလည်း ထိုနေရာမှာပင်စားသောက်ခဲ့ ပြီး နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေးများပင် ရှည်ထွက်လာခဲ့ သည်ကို
သိသာစွာ သတိပြုမိခဲ့ ကြပါတယ်...
ယခင်ကတည်းက နီပေါနိုင်ငံတွင် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းစာနယ်ဇင်းသမားဖြစ်ခဲ့ သည့် မစ္စတာ
လာမီချာနေဟာ ယခုအခါမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဘာလ်တီမိုးအရပ်တွင် Subwayအစာသွပ်ပေါင်မုန့် 
A Nepalese television presenter has setanew world record by hosting the longest-ever talk show. Rabi Lamichhane,aNepali who normally lives in the United States, stayed on air for more than 62 hours.
He interviewed politicians, journalists and celebrities on the theme "Buddha was born in Nepal", and took phone calls from viewers. The previous record was set by two Ukrainian presenters who stayed on air for 52 hours in 2011.
Mr Lamichhane said he had arranged the record attempt to help promote Nepal globally. Guinness World Record rules allowed him five minutes break every hour during the broadcast.
He ate on air, and even began growingabeard over the two-and-a-half-day programme. Although formerlyaradio and television journalist in Nepal, Mr Lamichhane is now resident in Baltimore in the United States, where he is the manager ofabranch of the sandwich shop Subway.
Posted by Unknown | at 5:27 PM |0comments
Three UAE men ejected from Saudi Arabian festival for being too handsome
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည့် ပွဲတော်တစ်ခုမှ ယူအေအီးနိုင်ငံသား ၃ဦးတို့ အား ၎င်းတို့ 
အနေဖြင့် အလွန်ရုပ်ဖြောင့်သောကြောင့် (ဆော်ဒီနိုင်ငံသူ) အမျိူးသမီးများ စွဲလမ်းနှစ်သက်သွားမည်ကို
စိုးရိမ်ရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်....
အဆိုပါယူအေအီးနိုင်ငံသားများဟာ ဆော်ဒီနိုင်ငံမြို့ တော် ရီယဒ်တွင် လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ကကျင့် 
ပခဲ့ သည့် အာရပ်ရိုးရာပွဲတစ်ခုသို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲနေစဉ် ဆော်ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာရဲများက နှင်ထုတ်ခဲ့ ခြင်း
ကြက်ဖမ်းမယ့် သူမလာနဲ့ ....
ယူအေအီးနိုင်ငံသား ၃ ယောက်ဟာ အလွန်ရုပ်ဖြောင့် ကြတာမို့ သူတို့ ကို ရွှေပွဲလာအမျိူးသမီးများ အရူး
အမူးစွဲလမ်းသွားကြမှာကို ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်လူကြီးတွေက စိုးရိမ်မိတယ်တဲ့ အချက်ကြောင့် ပွဲခင်းထဲ
ကဆွဲထုတ်ရတာပါလို့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်...
ထိုအမျိူးသား ၃ ဦးအား ၎င်းတို့ မူရင်းနိုင်ငံဖြစ်သည့် ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ မြို့ တော်အဘူဒါဘီသို့ ပြန်သွားနိုင်
ရေးရိုးစွဲဆွန်နီမွတ်စလင်များရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနဲ့ အုပ်ချူပ်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်
ငံမှာ အမျိူးသမီးများအား ဆွေမျိူး(အရင်းအချာ) မတော်စပ်တဲ့ အမျိူးသားများနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံခွင့် မ
Three Emirati men were ejected fromafestival in Saudi Arabia as they were deemed “too handsome”, leading authorities to fear women could become attracted to them.
The UAE nationals were taking part inaheritage event in the capital Riyadh on Sunday when they were thrown out by Saudi’s religious police.
A festival official said the three Emiratis were taken ouဲt on the grounds they are too handsome and that the Commission members feared female visitors could fall for them.
Steps were then taken to return the three men to UAE capital Abu Dhabi. Saudi Arabia,astrictly conservative Sunni Muslim society, prohibits women from interacting with unrelated males.
Posted by Unknown | at 5:42 PM |0comments
Labels: news: arabianbusiness.com
Man rescued after two-tonne bell fell on top of him
နှစ်တန်လေးသည့် ခေါင်းလောင်းအောက်ရောက်ခဲ့ သူအားကယ်တင်ခဲ့ ....
တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိူးသားတစ်ဦးအား နှစ်တန်အလေးချိန်ရှိ ခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခု ၎င်းအပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ 
ပြီး ပိတ်မိနေခဲ့ သဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ ရပါတယ်...
ကံဆိုးချင်တော့ ခေါင်းလောင်းကကိုယ့် ပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ တယ်...
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်း၊ ဇီဘိုမြို့ ရှိ ဂွမ်ကျူံးအမှတ်တရဗိမာန်သို့ သွားရောက်
အဆိုပါအမျိူးသားမှ ခေါင်းလောင်းကြီးအား အောက်မှဝင်၍ကြည့်ရှုနေစဉ် အခြားသောကြည့်ရှုလေ့ လာ
သူများက ခေါင်းလောင်းအား တွန်းလှည့် ခဲ့ ကြပါတယ်...
ထိုသို့ လှည့် ပါတ်မှုကြောင့် ခေါင်းလောင်းနှင့် နံရံအားချိတ်တွဲထားသည့် ကြိုးပြတ်သွားခဲ့ ပြီး ထိုသူပေါ်
သို့ ပြုတ်ကျခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မှလူများက ခေါင်းလောင်းကြီးအား စက်သီးကြိုးဖြင့် ဆွဲယူ "မ" ပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ထိုအမျိူးသားကတော့ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှုမရှိခဲ့ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်....
A man in China has been rescued afteratwo-tonne bronze bell fell on him and trapped him inside.
It happened duringavisit to the Guan Zhong memorial at Zibo City in eastern China.
While the man was looking at the bell from below, other visitors above were repeatedly spinning it.
That caused the rope attaching the bell to the ceiling to snap. Rescuers lifted the bell with the use ofapulley block. The man was reportedly uninjured.
Posted by Unknown | at 5:31 PM |0comments
Labels: news: itn.co.uk
Posted by Unknown | at 7:56 AM | 1 comments
Happy Myanmar New Year !!!!
ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးဖြစ်ပါစေ....
Posted by Unknown | at 6:56 AM |0comments
အလှအပတရားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သူတို့ ကိုယ်သူတို့ လှဖို့ သာဆိုယင် အမျိူးသမီးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်နာ
ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ အလှအပနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သည်းခံကြမှာလည်းဆိုတာကို
တော့ စဉ်းစားဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်....
တရုတ်နိုင်ငံကအမျိူးသမီးတွေကတော့ ပျိူမေတို့ လှသည်ထက်လှမယ်ဆိုယင် သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မီး
နဲ့ ရှို့ မယ်လို့ ဆိုယင်တောင် အရှို့ ခံကြမယ်ဆိုတာ ဒီသတင်းလေးကသက်သေပြနေပါတော့ တယ်...
သမင်မျက်လုံးဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူး လောလောဆယ်တော့မီးရှို့ ခံနေရပြီ....
ပထမဓါတ်ပုံထဲမှာဆိုယင် အ၀ါရောင်အနှစ်တွေထူပိန်းနေအောင်မျက်နှာမှာလူးထားတဲ့ အမျိူးသမီးတစ်
ဦးဟာ သူမရဲ့ မျက်နှာတစ်ဝက်ကို သဘက်တစ်ထည်နဲ့ အုပ်ထားပြီး မျက်လုံး ၂ လုံးနေရာအပေါ်မှာ မီး
ရှို့ ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်.... သူမတော့ လှပချောလာတော့ မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဘာကိုမှ ဂရုစိုက်မနေ
သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ အလှပြုပြင်ဆိုင်ကိုလိုက်သွားခဲ့ တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးရိုက်ကူးထားတဲ့ အဆိုပါဓါတ်
ပုံဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ လက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ကိုရောက်ပြီးကတည်းက ပျံ့ နှံ့ နေခဲ့ 
" အမေက အလှပြင်ဆိုင်သွားပြီး မျက်နှာအလှပြင်လို့ ကျွန်မလည်းသူနဲ့ လိုက်သွားခဲ့ တာပါ... အဲဒီမှာ
မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကျွန်မတကယ်ကိုတုန်လှုပ်သွားခဲ့ ရပြီး ဆက်တောင်မကြည့် ရဲတော့ပါဘူး..."
လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပြီး သူမအမေရဲ့ မျက်လုံးပေါ်မီးလောင်နေတဲ့ ပုံကိုတော့ အမိအရအသေအချာဓါတ်ပုံရိုက်
အသေအချာလေ့ ကျင့် သင်ကြားပေးထားတဲ့ အလှပြုပြင်သူတွေနဲ့ သာ ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုယင်တော့
အခုလိုလူ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မီးရှို့ ပြီးအလှပြုပြင်ပေးတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဘေးအန္တရယ်မဖြစ်စေပဲ လုံခြုံစိတ်ချရ
ပါတယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ အလှပြင်ဆိုင်များက အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ ကြပါတယ်...
" ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလှဖန်တီးရှင်ကသာ ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုယင် အရေပြားကို မီးမလောင်ပဲ အပူဓါတ်၊ အ
နွေးဓါတ်သာရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒါကြောင့် ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းပါတယ်..." လို့ ဟူလျောင်
မီးရှို့ ကုထုံးအလှပြုပြင်ရေးကျွမ်းကျင်သူ ဆူဇီလင်း ကဆိုပါတယ်...
သို့ သော်လည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Mail Online မှ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ခုကတော့ အဆိုပါလုပ်ရပ်ဟာ အ
လွန်အမင်းဘေးအန္တရယ်များလှပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်...
Posted by Unknown | at 5:16 PM |0comments
ခေါင်းမာတဲ့ အကြောင်းများပြောမလို့ လား..... ဒီဝက်ပေါက်ကလေးဆိုယင်တော့ ခေါင်းကြောနှစ်ထပ်မာ
တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်.... ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ဒီဝက်ကလေးမှာ မွေးကတည်းကခေါင်းနှစ်လုံး
ပါရှိနေခဲ့ လို့ ပါပဲ....
ဒီဝက်ကလေးကို တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်း၊ ကျန်စီပြည်နယ်၊ ကျူကျန်းနယ်က ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ မွေးဖွား
ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းနှစ်ခု၊ နားရွက်နှစ်ခု နဲ့ မျက်လုံးကတော့ခေါင်းနှစ်လုံးကနေ မျှကြည့် ရမယ့်အနေနဲ့ 
သို့ သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ ဒီဝက်ကလေးရဲ့ မွေးရာပါ ခန္ဓာကိုယ်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် 
အသက်ရှည်ရှည်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထူးခြားဆန်းကြယ်လှတဲ့ ဝက်ကလေးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ တဲ့ 
ခေါင်းနှစ်လုံးရှိတော့နှစ်ဖက်မြင်ရတာပေါ့ .....
ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဝက်ကလေး ပဋိသန္ဓေတည်ကတည်းက သားမျိူးဥဟာ နှစ်ခုကွဲပြီး
ဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် အစောပိုင်းအခြေအနေမှာပဲ နှစ်ကောင်စလုံးဆက်လက်ကြီးထွားဖို့မဖြစ်ပဲရပ်ဆိုင်းခဲ့ ပြီး တစ်
ကောင်တည်းအဖြစ်နဲ့ သာ ပုံသဏ္ဍာန်ထူးခြားစွာနဲ့ ဆက်လက်ဖြစ်တည်ခဲ့ တာဖြစ့်ပါတယ်....
အခုလိုပဋိသန္ဓေတည်ခြင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ထူး၊ အဖြစ်ဆန်းမျိူးဟာ တိရိစ္ဆာတွေမှာရော၊ လူတွေမှာပါ ဖြစ်တတ်
ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရင်ချင်းဆက်၊ ဦးခေါင်းချင်းဆက် စသည့် အမွှာမျိူးများမွေးဖွားလေ့ ရှိတတ်ပါတယ်...
ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိူးဟာဖြစ်ခဲတတ်ပေမယ့် ယခုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် ကြောင်များ၊ ငါးမန်း
များနဲ့ လိပ်များလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများတွင်ဖေါ်ပြခဲ့ ကြပါတယ်....
Unfortunatelyalocal vet who examined the rare pig said the deformity would make it difficult for it to survive to adulthood.
The condition is believed to be axial bifurcation, also known as polycephaly, which occurs when an embryo begins to split into twins but the process is haltered in its early stages.
The mutation occurs in both animals and humans, withafurther development resulting in conjoined twins.
Althougharare condition , two-headed kittens, sharks and turtles have all been reported in the media in recent years.
Posted by Unknown | at 11:58 PM |0comments
Posted by Unknown | at 6:11 PM | 1 comments
မီးသတ်ဆရာတို့ ရဲ့ ဖြစ်မျိူးစုံလင်...
အင်တာနက်နဲ့ အလှမ်းကွာနေတဲ့ နေရာ၊ အွန်လိုင်းတက်ဖို့ အချိန်မရလောက်အောင်များနေတဲ့အလုပ်တွေ
ကြားထဲကပဲ သံယောဇဉ်ရှိလှတဲ့ ဘလော့ ကလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့် မိတော့ လည်း အသစ်မတင်ရ
တာကြာပေါ့ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးဝင်လာတာမို့ ရတဲ့ အချိန်လေးအတွင်း အယင်ကစုထားတဲ့ ပုံကလေးတစ်
Posted by Unknown | at 5:10 PM |0comments
ဘ၀ဆိုသည်မှာလည်းသံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ မလွတ်သရွေ့ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန်ပြန်ဖြစ်တတ်
တယ်လို့ ဆိုတာမို့ ဖ၀ါးလက်နှစ်လုံး၊ ပခုံးလက်နှစ်သစ် ကလေးဘ၀ကတည်းမှစပြီး ပြုစုစောင့် ရှောက်လာ
တဲ့ ငြိမ်းချမ်းအေးမြတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်အမေ့ ထံမှာပဲ အမေချစ်တဲ့ သား၊ အမေ့ ကိုချစ်တဲ့ သားအဖြစ် သံသရာ
၁၆ နှစ်လုံးလုံးအမေ့ ကိုလုပ်ကျွေးခွင့် ရခဲ့ ပေမယ့် လည်း တုနှိုင်းမမှီတဲ့ အမေ့ မေတ္တာနဲ့ ယှဉ်
လိုက်ယင်တော့ အမေ့ ကိုသားကျေးဇူးဆပ်ခဲ့ တဲ့ ကာလလေးဟာ အမြဲစီးဆင်းနေတဲ့ မိခင်ဧရာဝတီမြစ်ကြီး
မှာ တစ်ခဏတာမျှရေပြန်ထိုးတဲ့့ဆန်ရေအငယ်လေးတစ်ခုသာသာပဲ၇ှိမှာပါအမေရယ်….
အသက် ၈၀ ဆိုတာအခုခေတ်လူတွေသက်တမ်းနဲ့ ဆိုယင် မနည်းလှပါဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် 
သားအတွက်ကတော့ အမေ သံသရာခရီး၇ှည်ကိုရုတ်တရက်ထွက်သွားခဲ့ တာဟာမြန်လွန်းလှပါတယ်လို့ ဆို
အမေ့ ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ အမေ့ ဘေးမှာသားကိုရှိစေချင်သလိုသားကလည်းအမေ့ 
ဘေးမှာ ရှိနေချင်တာမို့ သားတို့ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ဆန္ဒပြည့် ဝတယ်လို့ တော့ သားမ၀ံ့ မရဲနဲ့ ဝမ်းနည်းနှစ်
သိမ့် နိုင်ခဲ့ ပါတယ်အမေ….
ပြီးတော့ အမေ့ ကိုမိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မှ မိရိုးဖလာလွန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း
တရားတွေ အားထုတ်နိုင်ဖို့ ၊ ရဟန်းဒါယိကာမဖြစ်အောင်သားကိုယ်တိုင် ဒုလ္လဘရဟန်းဝတ်ပေးနိုင်ခဲ့ ခြင်း
တို့ ဖြင့် အမေ့ ကို ဓမ္မနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ခဲ့ တဲ့ အတွက်လည်းအမေ့ အတွက်သား ကျေနပ်နှစ်သိမ့် နိုင်ခဲ့ ပါ
ဒါပေမယ့် အမေရယ်… သားအိမ်ပြန်ရောက်လို့ သုံးလအတွင်းမှာပဲ အမေသားတို့ ကို စိတ်ချ
လက်ချထားခဲ့ တာကတော့ မြန်လွန်းလှပါတယ်… အဝေးတစ်နေရာက သားပြန်ရောက်လာလို့ အားတင်း
ထားတဲ့ စိတ်တွေလျော့ ချလိုက်တာလားလို့ လည်းသားထင်မိပါတယ်… အမေ့ မြေးလေးတွေနဲ့ အမြဲပျော်
ရွှင်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေသားဘယ်လိုမေ့ ပျောက်နိုင်ပါ့ မလည်းအမေ….
အမေနဲ့ သားတို့ ဒီဘ၀မှာရှိနေခဲ့ စဉ် ပုထုစဉ်ပီပီ အမှားမကင်းတာမို့ အမေ့ အပေါ်သားပြစ်
မှားကျူးလွန်ခဲ့ မိတာတွေရှိယင် ခွင့် လွှတ်ပါလို့ သားတောင်းပါကန်တော့ ပါတယ်အမေ….အမေအမြဲတမ်း
ထပ်ပြောပါရစေအမေ…. သံသရာအဆက်ဆက် အမေချစ်တဲ့ သား၊ အမေ့ ကိုချစ်တဲ့ သား
အဖြစ်နဲ့ ပစ္ဆိမနောက်ဆုံးဘ၀အထိ အကြိမ်ကြိမ်ဆုံတွေ့ နိုင်ရပါစေအမေ….
Posted by Unknown | at 8:23 PM | 13 comments
အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ် ဘယ်လိုကွာသလည်း...